चिनियाँ खोप जेठ २५ गतेबाट लगाउन थालिने, कसले पाउँछन्? :: Setopati
मंगलबार दिउँसो त्रिभुवन विमानस्थलमा आइपुगेको चिनियाँ खोप। तस्बिर: निशा भण्डारी/सेतोपाटी।
'स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आज बसेको छलफलले आगामी २५ गतेबाट चीनले दिएको खोप लगाउने निर्णय गरेको छ,' उनले भने।
'हामीसँग धेरै खोप छैन। ६० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका मानिस झन्डै साढे ८ लाख हुनुहुँदो रहेछ। त्यसैले यो समूहलाई लक्षित गरेर खोप दिने निर्णय भएको हो,' उनले भने।
'हिमाली जिल्लाहरूको हकमा बाहेक अन्य जिल्लाहरूमा ६० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका मानिसलाई खोप लगाउँछौं,' डा. गौतमले भने।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ १८, २०७८, १७:५४:००